Mmefu njem njem na -abata na North America belatara 74.1% na 2020
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Mmefu njem njem na -abata na North America belatara 74.1% na 2020
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Mweghachi amụma North America na -eso nkwekọrịta izugbe njem zuru ụwa ọnụ na njem njem ụlọ ga -ebu ụzọ gbakee site na 2022, mana ndị mbata mba ofesi agaghị agbake ruo 2024.
Mkpokọta ndị bịarutere mpaghara ahụ jụrụ 67% afọ na afọ na 2020.
Mmefu inbound mpaghara na -agbada site na 74.1%.
Amụma maka mmefu njem njem na-abata na-egosi na ọ gaghị agafe ọkwa ọrịa tupu oge 2025.
Ebe njedebe n'ofe North America (USA, Mexico na Canada) nọ n'ọkwa dị iche iche nke mmepe njem. Agbanyeghị, otu ihe na-ebutekarị bụ na mmetụta nke ọrịa COVID-19 na 2020 enwewo mmetụta siri ike maka akụ na ụba njem ọ bụla.
Nkwupụta ọhụụ 'njem nlegharị anya njem nlegharị anya: North America (2021)' chọpụtara na ngụkọta ndị bịarutere mpaghara ahụ dara 67% afọ (YoY) na 2020 yana mmefu mbata site na 74.1%. Mweghachi amụma amụma nke North America na-eso nkwekọrịta izugbe njem zuru ụwa ọnụ na njem nlegharị anya nke ụlọ ga-ebu ụzọ gbakee (2022), mana ndị mbata mba ofesi agaghị agbake ruo 2024. Amụma maka mmefu njem nlegharị anya na-abata, agbanyeghị, na-atụ aro na nke a agaghị agafe ọkwa ọrịa tupu oge 2025.
A ka nwere ike mata COVID-19 dị ka nnukwu ihe iyi egwu na-eto n'ime mpaghara njem, yana na North America nke a adịghị iche.
Mfu nke mmefu ndị njem na-abata na 2020 (-74.1%) ka USA, Mexico na Canada dị mkpa. Amụma ọhụụ na -egosi na atụghị anya na nke a ga -agbake nke ọma ruo mgbe 2025 gasịrị, na nke a ga -abụ otu n'ime ihe kachasị emetụta mgbake akụ na ụba maka mpaghara n'ime afọ ole na ole sochirinụ.
Otu uru dị ukwuu nke njem nlegharị anya na -abata bụ imefu ego, nke nwere ike ịkwalite ụtụ akụ na ụba, kpalie ọrụ ma rụọ ọrụ dị ka ihe mkpalite maka mmepe akụrụngwa. Ebe ọ bụla na -enwe onyinye nlegharị anya ụlọ siri ike, mana enweghị ike ịdabere na nke a naanị iji mebie ọdịda nke njem mba ofesi.
Njem gaa North America site na ebe ndị ọzọ n'ụwa niile nwere ike ịdị ọnụ. Nnyocha e mere n'oge na -adịbeghị anya chọpụtara na 23% nke ndị na -aza ajụjụ ọnụ zuru ụwa ọnụ belatara mmefu ego ezinụlọ ha n'afọ gara aga na 27% 'belatara' ha. Mmefu ego belatara pụtara obere mmefu na ntụrụndụ na -emetụta ike njem. Mgbochi mmefu ego ga -adị mkpa n'ịzụta ahụmịhe njem n'ime afọ ole na ole sochirinụ, nke nwere ike tinye mgbake njem njem North America ma e jiri ya tụnyere mpaghara ndị ọzọ n'ụwa niile.
N'ihi ịdị nso, njikọta na ndị na-arụ ọrụ ụgbọ ala dị ọnụ ala (LCC), njem n'etiti US, Canada na Mexico nwere ike dị ọnụ ala, na-akpali njem gafee ebe. Njem ime obodo ga -adị oke mkpa na mgbake njem nlegharị anya nke North America. Ebe ọ bụla na -atụkwasị obi ugbu a na ebe ndị agbata obi dị ka isi mmalite maka ego akụ na ụba.
Site na mbara ala ndị buru ibu gụnyere mpaghara ala gbara osimiri okirikiri, ogige ntụrụndụ mba na oke ugwu ruo obodo na -eme mkpọtụ juputara na akara ngosi ọdịbendị, North America na -erite uru site na onyinye nlegharị anya siri ike. Ya mere, enwere ọtụtụ ihe na -adọta ndị na -adọta ndị ọbịa n'ụwa niile maka ntụrụndụ na azụmahịa. Na mgbakwunye na ebe ndị mara mma ị ga -eleta, nnukwu ahịa VFR (ndị enyi na ndị ikwu na -eleta) bụkwa ihe siri ike. Mmekọrịta dị n'etiti otu azụmaahịa na -aga ebe (DMOs) na ụlọ ọrụ gọọmentị ga -adị mkpa iji hụ na enyemaka akụ na ụba maka mpaghara na -aga n'ihu.